यी तीन चिनी मिलको बैंक खाता रोक्का गर्दै सरकार – Khabarhouse
Khabar house | ९ माघ २०७६, बिहीबार ०२:३५ | Comments
काठमाडौं : सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम नदिने तीन चिनी मिलको बैंक खाता रोक्का गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाचा गरेको समयमा पनि बक्यौता भुक्तान नगर्ने अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्री इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्री र लुम्बिनी चिनी उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यी तीन उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न बुधवार नै आन्तरिक राजस्व विभाग लाई पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयले उखु किसानलाई दिइने भुक्तानी बाहेक अन्य सबै बैंक कारोबार रोक्का गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ । ‘यी तीन उद्योग माथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो । लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक सम्पर्कमा पनि आएका छैनन,’
बुधवार मन्त्रालयमा गरिएको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए । उखु किसानहरूले १४ चिनी मिलबाट रू. १ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी बक्यौता पाउन बाँकी छ । यद्यपि, स्वयम् मन्त्रालयसँगै यसबारेमा यकिन तथ्यांक भने छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
हालसम्म हिमालय सुगर मिल्स, इन्दुशंकर चिनी उद्योग, इस्टर्न सुगर मिल्स, रिलायन्स सुगर इन्डस्ट्री र भागेश्वर सुगर इन्डस्ट्रीले किसानहरूलाई सबै भुक्तानी दिइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । सहसचिव भट्टराईले भने, ‘यी पाँच उद्योगले सबै भुक्तानी दिएको जान कारी दिएका छन् । तर, बैंक खाता उपलब्ध नभएका किसानको भने बाँकी रहेको बताएका छन् ।’
मन्त्रालयका अनुसार अन्य चार कम्पनीले भने किसानहरूलाई आंशिक रकम भुक्तानी गरेका छन्। किसानहरूलाई कुल रू. २१ करोड ४० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले पछिल्लो समय रू. ११ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै रू. ४२ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी अन्नपूर्ण सुगरले किसानहरूलाई मात्र रू. ३ करोड ९० लाख भुक्तानी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रीले मात्र रू. ७४ लाख किसान लाई भुक्तानी दिएको छ जबकि उसको कुल बक्यौता रकम रू. १० करोड रहेको छ । यसै गरी, एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीले किसान हरूलाई रू. ७ करोड ९३ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त उद्योगले बैंक खाता उपलब्ध नभएका किसानको मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रीराम सुगर मिल्सले भने जग्गा बेचेर बक्यौता तिर्ने गरी किसानसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त मिलले किसान हरूलाई रू. २६ करोड ७७ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । श्रीरामले जग्गा बेचेर बक्यौता तिर्ने विषयमा किसान सँग गरेको सम्झौता पत्र मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अझै ४ चिनी मिल भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, बाग्मती खाँड सारी चिनी मिल्स, महाकाली सुगर इन्डस्ट्री र लुम्बिनी चिनी उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् । मन्त्रालयले उक्त उद्योगका सञ्चालकहरूलाई उपस्थिति गराइदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। बाग्मती खाँडसारीले रू. ८ करोड ४१ लाख तथा लुम्बिनी चिनी उद्योगले रू. १० करोड दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघको भनाइ छ ।